Cuntada, Bulshada, Qoyska
In ka badan 200 oo sano, suuqyada maxalliga ah waxay ahaayeen meel la isugu yimaado xaafadaha magaalooyinka.Soogalootiga iyo qaxootiga, suuqyadu waxay bixiyaan meel ay ku wada xiriiraan, la socdaan wararka maxalliga ah iyo kuwa qaranka oo ay maqlaan xanta wadankoodii, ku hadlaan afka hooyo, iyo iibsashada cuntooyin caan ah.
Ka hor inta aan gaadhiga iyo qaboojiyaha si weyn loo helin, dadku waxay wax ka iibsanayeen meelo ka mid ah guryaha, iyagoo joogsaday dukaanka hilibka, roodhida, iyo suuqa cuntada ee kala duwan. Tignoolajiyada iyo gaadiidku waxay
beddeleen sida dadku u dukaamaystaan oo ay u wada xaajoodaan, laakiin suuqyadu waxay weli lama huraan u yihiin bulshooyin badan oo soogalootiga ah.
Sheekooyinka suuqyada ay aasaaseen soogalootiga iyo qaxootiga waxay ka kooban yihiin qiyam aan waqti lahayn oo ah shaqo adag, karti, adkeysi, iyo u heellanaanta qoyska iyo bulshada.
In ka badan Suuqyadu waxay wadaagaan sheekooyinka sagaalka suuq ee taariikhiga ah ee soo socda iyo lix suuq oo casri ah iyada oo loo marayo codadka milkiilayaashooda iyo macaamiishooda. Ganacsiyadani waxay u adeegaan macaamiisha dhaqan ahaan kala duwan.
Suuqyada Taariikhiga ah
Suuqa Chick’s, 60 Hickok St., Winooski; Faransiis Kanadiyan, oo uu maamulo Edmund “Chick” Dupont (1944-1982), Richard iyo Carole Corbiere (1982-2000), iyo Sonny iyo Pam Vezina (2000 ilaa hadda)
Suuqa Kaash ee Danis, 37 Conger Ave., Burlington; Faransiis Kanadiyan, oo ay maamulaan Arthur iyo Donat Danis (1926-1969)
Epstein & Melnick, 27 Main St., Winooski; Ruush/Yuhuud, oo ay maamulaan Mayer Epstein iyo qoyskiisa (1910-1973) iyo Samuel Melnick (1910-1940)
Suuqa George, 38 Pearl St., Burlington; Lubnaani, oo ay maamulaan George iyo Isabelle George (1935-1962)
Suuqa Izzo, 77 Pearl St., Burlington; Talyaani, oo ay maamulaan Louis iyo Concetta Izzo iyo qoyska(1922-1974)
Dukaanka Raashinka J & M , 68 Archibald St., Burlington; Afrikaan Maraykan ah, oo ay aasaaseen John iyo Maldred McLaurin oo ay iska leedahay McLaurin (1975 ilaa hadda)
Suuqa Kieslich, 203 North Ave., Burlington; Jarmal , oo ay maamulaan John V. Kieslich iyo qoyskiisa (1911-1987)
Dukaamada Rome, 68 Archibald St., Burlington; Ruush/Yuhuud, ay maamulaan Barnet iyo Lena Rome iyo qoys kiisa (1924-1975)
Suuqa Roy, 126 Weaver St., Winooski; Faransiis Kanadiyan ah, oo ay maamulaan Edward Roy iyo qoyskiisa (1923-1967)